Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Ciidanka Wayaanaha & Shacab Kudagaalamay Arba-Minch.
Deg Deg: Ciidanka Wayaanaha & Shacab Kudagaalamay Arba-Minch.
Wararka naga soo gaadhaya Dagmada Arba-Minch ee Gobolka Shucuubta Koonfureed ee wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya dagaal faraha laysula tagay oo ciidanka dhaqanka xun ee wayaanaha iyo dadka shacabka ah ee deegaanka dhex maray.
Sida xogta aan kuhelayno dagaalka ayaa bilowday kadib markii dadka dhulka iska leh ee shacabka ah ay kabiyo diideen gacan dheerarka iyo talaabooyinka khaldan ee ciidanka wayaanaha iyo maamulka gumaysigu ay kawadaan deegaanka shucuubta koonfureed.
Warka ayaa intaas kudaray in dadka shacabka ah oo aad uhubaysan ay iska caabiyeen ciidanka wayaanaha ee gardarada kucaan baxay, waxaana lasheegayaa in shacabku ay gudaha ugaleen qaarkamid ah xeryaha ciidanka wayaanaha ee magaalada Arbaminj halkaas oo mudo ay gacanta kuhayeen.
Dhinaca kale khasaare xoogan ayaa laga soo sheegayaa labada dhinacba, waxaana lasoo warinayaa dhimasho iyo dhaawac badan oo halkaas kadhashay kuwaas oo ubadan dadkii shacabka ahaa ee magaalada iska joogay kuwaas oo ciidanka wayaanuhu ay qaab aar goosi ah ulaayeen dagaalkii dhacay kadib.
Meelo aad ubadan oo dhulka ay wayaanuhu gumaystaan ah ayaa laga soo sheegayaa dagaalo xoogan oo dhex maraya dadka shacabka ah ee dulmiga diidan iyo ciidanka bahalka ah ee cadaalad darada kucaan baxay, waxaana dhulka ay dagaaladu kasocdaan kamid ah wadanka Ogadenia halkaas oo dadka shacabka ah ee lagumaysto ay aad ukacsan yihiin.
Dadka arimaha siyaasada kafaalooda ayaa dagaal dhex mara dowlad iyo dadkeeda kumicneeyay albaabka laga galo burburka, waxayna xeeldheere yaashu saadaaliyeen in Itoobiya ay wadadii burburka cagta saartay.